गीतकारका रूपमा जस योञ्जन प्यासी | samakalinsahitya.com
गीतकारका रूपमा जस योञ्जन प्यासी
२. गीत : साहित्यिक उपविधाका रूपमा-
गीतको उद्गमस्थल नै हृदय हो। हृदयमा उब्जिएका रागभावहरूलाई शब्दमा अभिव्यक्ति दिनु नै गीतको निर्माण हो। यो हृदयमा नै सिर्जित हुन्छ भने यसलाई हृदयले नै ग्रहण गर्छ। आफ्ना हृदयका सुमधुर र सुकोमल भावनाहरू विभिन्न रागात्मक अनुभूतिले उद्दीपित ऊएर लयात्मक रूपमा प्रकट हुनु नै गीतको सिर्जना हुनु हो। यसमा व्यक्तिको तीब्र अनुभूतिको अभिव्यक्ति हुन्छ। यसमा एउटै भाव वा विचारको विशेष प्रस्तुति हुन्छ।यसैगरी गीतमा एकोन्मुखता, को निर्वाह हुनाले संक्षिप्तता, सांकेतिकता, हुन्छ। लयको सिर्जनाको लागि शब्द र ध्वनिको संयोजनमा निर्भर रहन्छ। यसमा एकजना सम्बोधकस अर्को सम्बोधित र तेस्रो चाँहि अन्य विषय हुन्छ। गीतलाई एक्लै, युगल र समूह गरी तीन प्रकारले गाउन सकिन्छ।
३. गीतकारका रूपमा जस योञ्जन प्यासी-
यता भारतबाट एकनिष्ठ रूपमा गीतलेखनमा संलग्न रहने पुरण गिरी, पुष्कर पराजुली, कमल रेग्मी, अजीत बस्नेत आदिका ठुल्दाजु हुन् योञ्जन। सत्तरीको दशकमा नै रेडियो नेपालका मान्यताप्राप्त गीतकारका रूपमा रहेका प्यासीले यस दिशातर्फ अझसम्म नै कलम चलाइरहेछन्। उनका गीतमा कतै जीवन-जगत्कोस चिन्तन छ कतै मायाका लहड छ। मायाका पनि विभिन्न पाटाहरू उद्वेलित छन्। प्रेम अनुभूतिका विभि्न यात्रामा जे जे भोगे, देखे सबै नै उनका गीतको सामल बनेका छन्। उनका गीतमा आशाका स्वर पाइए तापनि निराशावादी चिन्तनको नै बढी प्राधान्य छ। जीवनमा घात सहेको, अपमान र बदनाम भोगेको वर्णन संकेत छ। उनले आफ्ना केही गीतमा भने जीवनका सुख-दुःखभित्र पनि आशाको किरण झल्केको देखेका छन्। जीवन र जगतप्रति मोह, जिजीविषालाई अभिव्यक्त दिएको पाइन्छ।
माया=	आँखाभरि आउने	मुटुभरि छाउने	जूनको किरण	फूलको रूप	दिलको मूर्ति	सर्वव्यापी हुने	शीतको थोपा
मायालाई= कता राखूँ	कता सजाउँ	गीत बनाइ गाइरहूँ कि	माला गाँसी लगाइरहूँ कि
३.१. सम्वेदनशीलता- सम्वेदनशीलता पनि उनको गीतमा पाइने एउटा प्रबल पक्ष हो जोबिना गीत को सफलता रहँदैन। आफ्नो हृदय नै सम्बेदनाका अजस्र सोत हो। उनका निम्ति वेदनाको झरी रोकिदिने, झरीसरि झरेको जिन्दगीलाई थामिदिने को छ भन्दै मनका विभिन्न औडाहालाई अभिव्यक्ति दिएका छन्। कतै उनी आफुलाई सच्चा मान्छे भई बाँच्ने, असल काम गर्ने आफुजस्तै अभागीहरूलाई डोहोर्यानउन सक्ने, भाग्य लेख्न सक्ने भन्ने आन्तरिक चाह प्रकट गर्छन्। कतै उनमा काल कहिले आउला भन्ने पर्खाइ छ, रमाइलो र घमाइलोको अर्थ भुलिसकेका छन्, कतै दीवन र विपनाको खुशी र सिर्जनाको अर्थै भुलिसकेका छन् भन्ने भावलाई संवेदनशील भई व्यक्त गर्छन्। यद्यपि ती वैयक्तिक भावहरू सार्वभौमिक पनि छन्। गीतकारले भोगेका प्रेमपीडा र प्रेमानुराग उनको एकल नभएर सामुहिक पनि छन् किनकि यस्ता भाव सार्वभौम हुन्छ।
गीतको आन्तरिक पक्षमा सम्वेदनशीलता हुनुपर्छ भने बाह्य पक्षमा लय र तालको संगम हुनुपर्छ। उनका गीतमा जीवनका सुख-दुःखात्मक अनुभूति, जगतको घात प्रतिघात, मानवताप्रतिको आस्था र निष्ठा पाइन्छ। वेदनाको झरी रोकिदिने, झरीसरी झरेको जीवनलाई थामिदिने को को छ भन्दै मनका औडाहालाई अभिव्यक्ति दिएका छन्। कतै उनलाई आफु सच्चा मान्छे भई बाँच्ने, असल काम गर्ने, आफुजस्तै अभागीलाई डोहोर्याईउन सकुँ, भाग्य लेख्न सकुँ भन्ने चाह व्यक्त गर्छन्। कतै उनमा कहिले काल आउला भन्ने पर्खाइ छ, रमाइलो र घमाइलोको अर्थ भुलिसकेका छन्, जीवन र विपनाको, खुशी र सिर्जनाको अर्थ नै भुलिसकेका छन्।
३.२. सौंदर्यचेतना- गीतकार प्यासीका गीतमा सौंदर्य चेतना प्रबल रूपमा पाइन्छ। आफुले रूचाएकी प्रेयसीको रूप सौन्दर्यलाई प्राकृतिक छटासित तादात्म्यता देखाएका छन्। एकापट्टि प्राकृतिक सौन्दर्य र अर्कापट्टि रूप सौन्दर्यको समानान्तर वर्णन गरेको पाइन्। कुनै प्रेयसीको सौंदर्यको वर्णन गर्दै त्यसका विभिन्न रूप जस्तै धरतीकी छोरी, स्वर्गकी परी, कमलको पत्रदल झैं अधर भएकी छ। त्यही प्रेयसी गुराँसको डाली-डाली नाचिहिँड्ने, चरीसमान रंगीन पखेटामा लुकेजस्ती छ, पिहुँ पिहुँ स्वरले बोलेजस्ती सुकुमारी र रंगीन मिजाजकी छ। उनी भमराको बोली पनि सुन्छन्, फूलसित बात मार्छन्, फूलको ढोका खोलेको सुनेका छन्, प्रेयसीले भेटेर मुस्काइदिँदा औंसीमा पनि जून उदाएको, प्रेरणाको वर्षा बर्सिन्छ।
३.३. एकोन्मुखता- गीतमा विषयगत एकोन्मुखता अनिवार्य रूपमा हुनुपर्दछ। यसको अभावमा गीतको भावभंगी बिथोलिन्छ र तीब्रता आउँदैन। एउटै भावलाई नै विभिन्न विषय, प्रस्तुति र अनुभूतिले छेकारो मारेर पुष्टी गर्दै लगेको पाइन्छ। गीतमा रहेको एउटै मूल भावलाई विभिन्न विम्ब, प्रतीक, दृश्टान्तबाट एकोर्या।एर लगी टुङ्ग्याइएको पाइन्छ। उनका गीतमा विभिन्न भाव अभिव्यक्त भएका छन्। जीवनमा आइपर्ने विभिन्न अवस्थाका भावलाई गीतहरूले समात्ने प्रयत्न देखिन्छ। प्रेमपीडा, प्रेमानुराग, रोदन, संवेग आदि पाइन्छन्। दोस्रो संग्रहमा आधनिक गीत खण्डमा रहेका जम्मा बहत्तारवटा गीतमध्ये बत्तीस-तेत्तीसवटा गीतमा प्रेमपीड, पाइन्छ। यसबाहेक अझै अरू केही गातमा पनि निराशाका, विरक्तिका भाव पाइन्छन्। यद्यपि यसमा यस्ता कालका निराशावादी गीत मात्र छैनन् अपितु जीवनमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने, कतै बसन्त छाएको, जस्ता भाव पनि पाइन्छन्। कतै प्रेमानुरागका मिठा भाव, प्रेयसीको रूपवर्णन आदि पनि पाइन्छन्।
म	एउटा खुल्ला किताब	तिमीले पनि पढे हुन्छ
म एउटा खुल्ला चिठी	तिमीले पनि पढे हुन्छ
म	एउटा सादा पन्ना	तिमी पनि लेखे हुन्छ।
३.४. वैयक्तिकता- उनका अधिकाङ्श गीतहरू वैयक्तिक भावधाराका छन्। गीतकारका निम्ति प्रेम र प्रकृतिमा नै गीत सिर्जना हुन्छ। प्रेमानुभाव र प्रेमपीडा दुवैमा गीतमा गीतको मुहान भेटिन्छ। त्यस्तैगरी प्रकृतिका हरेक पक्षमा गीतका स्रोत समाविष्ट छन्। प्रीत र घातमा, हाँसो र रोदनमा गीत देख्छन्। मनका अवस्थाअनुसार प्रकृति हाँसेको, रोएको देखिन्छ। आँधी-बेहेरी, रमाइलो-घमाइलो, तुवाँलो आदि मनको मनको अवस्था अनुसार झल्किन पुग्दछ। गीतको विचमा बसेर सुनाउने एउटा कथायिता म प्रायः सर्वत्र देका पर्दछ। म को अन्तर्वेदनालाई गीतमा उतार्न विभिन्न बिम्ब र प्रतीक, कल्पना, स्वैरकल्पना आदिको प्रयोग गरिएको पाइन्छ। गीतमा म कतै हामी प्रयोग गरिएको छ-
३.५. दार्शनिकता- गीतकार प्यासी कतै दार्शनिक भई जीवन र जगतप्रति आफ्नो दर्शन, भाव विचार र अनुभव अभिव्यक्त गर्छन्। उनी जीवन भोगाइका क्रममा सांसारिक तीतो सत्यको उद्घाटन गर्छन् त कतै जीवनलाई यसरी परिभाषित गर्दछन्-
जीवनजस्तै जगत् पनि सरल नभई जटिल छ। यो समाज र जगतमा अधर्म र असत्यको बोलबाला छ। उनी जगतमा जीवन र मरणलाई एउटै पाउँछन्। समाजमा पाखण्डको खेती खुबै सप्रिएको पाउँछन्, धर्मको नाममा पाप बढेको छ औ जसले पाप गर्योड उसैलाई पुण्यलाभ भएको देख्छन्-
३.६. वर्ण प्रयोग- प्यासीले गीतमा हुनुपर्ने वर्णको प्रयोगमा पनि सचेतता देखाएका छन्। उनका गीतमा कवर्ग, चवर्ग, तवर्ग. पवर्गको आधिक्य देखिन्छ भने अनुनासिक वर्ण प्रयोग गरेका छन्। त्यस्तैगरि टवर्गका वर्णहरू यदाकदा मात्र प्रयोग गरेका छन्। श्रुतिमधुरता, गेयात्मकताका निम्ति टवर्ग उपयुक्त मानिन्न। वर्णहरू अनुदात्तदेखि उदात्ततर्फ गएका छन-
झर्योक जीवन झरीसरि थामिदिने को छ ऱ?
३.७. आनुप्रासिक आनुषांगिकता- गीत भनेका गद्यजस्तो हुँदैन। यसमा अनुप्रासहरूका विभिन्न प्रयोगगत चमत्कार हुनुपर्छ। अरूभन्दा पनि अन्त्यानुप्रास चाँहि कुशलतासँग प्रयोग गरिएको हुनुपर्छ। गीतकार प्यासी यस दिशातर्फ सचेत छन्।
फूलसँग	हाँस्दै	खेल्दै	आउने	हाम्रो	बानी
हावासँग	नाँच्दै	गाउँदै	आउने हाम्रो	बानी
तिम्रा इच्छा रहरहरू सबै सबै पुर्याछइदिन्छु।
३.८. गीतमा पात्र प्रयोग- प्यासीका गीतमा सम्बोधक, सम्बोधित र कतै कतै अन्य गरी तीन पात्रको प्रयोग गरिएको छ।
३.९. काल्पनिकता- यस सङ्ग्रहमा गीतकार प्यासीले विभिन्न भावका अतिरिक्त कल्पना पनि मिसाएका छन्। कल्पना मनबाट उब्जेका नयाँ कुरा हो। कल्पनानै सिर्जनाको स्रोत हो। कतै प्रेमिका आउँछिन् कि, कतै आफुलाई विभिन्न अवस्थामा पाउनु, नयाँ नयाँ कुरा देख्नु सबै कल्पना हुन्।सबै गीत नै कल्पना कै उपज हुनाले यसका विभिन्न स्वरूप धारण गरेको छ। रिम्झिम् पानी पर्दा कस्तो कस्तो लाग्छ, आफु शीत भइ बिलाएको, मनमन्दिरमा कसैलाई सजाएको, कोही अपसराले पर्दाबाट चिहाएको, साँझ एकलै आएको, भमराको बोली सुनेको इत्यादि कल्पना गरेको पाइन्छ।आफ्नो मनको वेदनाको झरी रोकिदिने कोही छ कि भनेर यसरी कल्पना गर्छन्-
झर्योक जिन्दरी झरीसरि थामिदिने को छ र?
३.१०. बिम्ब र प्रतीक प्रयोग- गीतकारले कल्पनासँगै विभिन्न बिम्बहरूमा श्रावणिक बिम्, दृश्य बिम्ब, सपर्श बिम्ब जस्ता इन्द्रिय बिम्बका अतिरिक्त प्राकृतिक बिम्ब पनि झल्काएका छन्। आफ्नो मनको भावअनुसार नै प्रकृतिले विभिन्न रूप धारण गरेको देखाएका छन्। आफु खुशी हुँदा प्रकृति पनि रोएको र दुखी हुँदा हाँसेको बिम्बलाई यसरी व्यक्त गरेका छन्-
३.११. प्रगतिशीलता- सङ्ग्रहमा केही गीतमा प्रगतीशील विचारधारा पनि पाइन्छन्। समाजका सर्वहारा र शोषित वर्गको हक र हितका लागि उनीहरूकै संघर्ष र क्रान्तिको स्वर पनि उरालिएको पाइन्छ।यद्यपि यस्तो भावधाराको गीत भने एउटै थोरै छ-
म संग्राम ङुँ संघर्ष हुँ
३.१२. अलङ्कार विधान- अलङ्कार विधानका दृष्टिले पनि प्यासीका गीतहरू उत्कृष्ट छन्। गीतभित्र सचेत वा असचेत रूपमा जे भए पनि विविध अलङ्कारहरू स्वतः झल्केका छन्। गीतकारमा सौंदर्य चेतना नहुँदो हो ता अलङ्कार पर्ने नै थिएनन्। यसका गीतहरूमा उपमा, अनुप्रास, रूपक, दीपक, उत्प्रेक्षा, तुल्ययोगिता, अपन्हुति, विरोधाभाष, अतिशयोक्ति आदि अलङ्कारहरू रहेका छन्।
झर्योक जीवन झरिसरि थामिदिने को छ र?
३.१३. गीतमा शब्द प्रयोगः गीतमा शब्द प्रयोगमा खुबै ध्यान दिनुपर्दछ। नत्र भने गायकीमा असुविधा हुन्छ। शब्दहरू जतिसक्दो कोमल. गेयात्मक, मधुर हुनुपर्छ। यसमा रहेका केही शब्दमा पिरती, करकाप, शिखर, राजमार्ग,निष्ठुरी, काँड़ा, डुङ्गा, हाँगा, उपमा, पुण्य,बोलिदेउ, बैगुनी, अपमान, पन्ना, किताब, बेमौका, मनाकाश, कुइरो,रूखो,निस्ार, लाछिएको, निर्मोही, बेइमानी, पाहाड़, दृष्टि, पतझड़, झ्यालखाना, सकिजाने, प्रतिबिम्ब, सिउँडी, श्रद्धा, शिशिर, सईबई, चितुचाँगे, लालुपाते, टुङ्गना, सारङ्गी, व्यथालु, मझधार, झञ्झा, हिमप्रपाती आदि हुन्। यद्यपि कुनै शब्दहरू भने गायनका निम्ति प्रतिकूल पनि नपाइने होइनन्। जस्तै- पतझड, मुढा, सिउँडी, समीक्षा, भकुण्डो, फकुण्डो आदि हुन् जो नगण्य छन्।
३.१४. सहजानुभूति- गीतकार प्यासीलाई गीत रचना गर्दा कुनै सकस नपरेको भान हुन्छ। उनले गीतमा शब्दप्रयोग, पंक्तिप्रयोग गर्दा स्वाभाविक रूपमा सचेत रूपमा भनौं भाषिक रूपका विभिन्न पक्षमा विचलन नगरी स्वाभाविक रूपमा गीत उतारेका छन् तापनि गीतमा सौन्दर्य पाइन्छ। आफ्नो भावनाको वेगलाई संयमित र सहज रूपमा गतिमयता दिएका छन्। यद्यपि उनका गीतमा विचलन पनि कता कता नपाइने होइन। अधिकांश रूपमा शिष्ट, मानक, शुद्ध भाषिक रूप र कतै सौन्दर्य वृद्धिका लागि विचलनको पनि प्रयोग पाइन्छ। अतः यो भाषिक स्ऴाबाविकता र विचलनको सन्तुलन नै उनको गीतको अभिव्यक्तिगत कौशलता हो।
४. सङ्ग्रहका अरू खण्ड- यी दुई सङ्ग्रहमा आधुनिक गीतका अतिरिक्त आधुनिक युगल गीत, दशैं गीत, होली गीत, देशभक्ति गीत, भजन, सेलो आदि पनि समावेश गरिएको छ।
४.१. भजन- बडा दशैंको शुभोपलक्ष्यमा आकाशवाणी खरसाङबाट प्रसारित मालश्री रागमा आधारित जय देवी भैरवी सङ्गीत रूपकका निम्ति रचित दुर्गास्तुतिपरक दसवटा भजनहरू सङ्कलित छन्। यी भजनहरू के बी राईले संगीत संयोजन गरी विभिन्न कलाकारले सामुहिक रूपमा गाएका छन्। यी भजनहरूमा शब्दकार शब्द र लयप्रति सचेत छन् तथा शब्द र लयतर्फ पनि ध्यान पुर्याजएका छन्। वर्णगत कोमलता, भावगत तादात्म्य र शब्दगत मधुरताले भरिएका छन्-
४.२. नयाँ वर्षको शुभकामना गीत- सङ्ग्रहमा छवटा जति नयाँ वर्षका गीत छन्। यी गीतहरूमा सांसारिक सुख-शान्ति, भाइचारा, समृद्धिको कामना व्यक्त गरिएको छ।–
४.३. देशभक्ति गीत- सङ्ग्रहको खण्ड ङ मा देशमहिमाको आठवटा गीत रहेका छन् भने एउटा खुल्ला चिठी हुँ म मा पनि आठवटा नै देश भक्ति गीत छन्। यसमा देशप्रेम, महिमा, देशका निम्ति कर्तव्य, देश विकासका निम्ति कर्ममय जीवनशैली, राष्ट्रीय भाव, अनेकतामा एकता, भातृत्वको भावना जगाउने भावका गीतहरू पाइन्छन्। राष्ट्रीय एकता र अखण्डता अक्षुण्ण राख्ने दृढ्ता व्यक्त गरिएको छ। यसका साथै राष्ट्रका निम्ति मर्ने शहीदप्रति समर्पण पनि पाइन्छः
४.४. तामाङ सेलो- यस सङ्ग्रहको खण्ड घ मा दसवटा तामाङ सेलोमा आधारित गीतहरू रहेका छन्। तिनमा च्याङ्बा र मैचाङका आपसी माया-पिरतीको उद्गार, कतै पेच हानाहान पाइन्छन् भने कतै मान्छेको जीवन र जोबन बितेपछि फर्केर आउँदैन भन्ने भावधारा पनि पाइन्छ-
जोबन जान्छ छल्केर
४.५. होली गीत- आकाशवाणी खरसाङबाट होली को उपलक्ष्यमा प्रसारित संगीत रूपक राधा गोविन्द का जम्मा चारवटा गीतहरू समावेश छन्। यसमा पहिलो गीत अत शास्त्रीय नृत्यका निम्ति उपयुक्त देखिन्छ। यसमा कोमल वर्ण, भाव र शब्द छन् –
५. गीतकारका रूपमा जस योञ्जन प्यासीको मूल्याङ्कन र उपसंहार- नेपाली गीत लेखनका प्रसङ्गमा यता भारतका नेपाली गीतकारहरूको ठुलो संख्या र योगदान रहेको छ। यहाँबाट धेरै मात्रामा नेपाली गीतकारहरू हुँदा पनि त्यति मूल्याङ्कन भएको देखिन्न। हुन ता धेरै संगीतकारहरूले पनि गीत रचेका छन् यद्यपि ती जम्मै गीतकार चाँहि होइनन्। बरू गुणात्मक र मात्रात्मक रूपमा गीत रचना गर्ने वर्तमानका समर्पित गीतकारहरूमा जस योञ्जन प्यासी, पुरण गिरी, पुष्कर पराजुली, कमल रेग्मी आदि हुन्।
प्रकाशित मिति : प्रकाशन मिति : सोमबार, 29 मङ्गसीर, 2071
नेपाली साहित्य अनि डुवर्स
असमेली नेपाली साहित्य समालोचना - एक चर्चा उठान
भारतीय नेपाली भाषा र नेपालको भाषा : तुलनात्मक दृष्टि
भारतमा नेपाली नियात्रा साहित्यको सर्वेक्षणात्मक अध्ययन।